Kungani & Ukuthuthukisa I-SEO Yakho Ngokukhangisa Okuqukethwe Nemithombo Yomphakathi - Amacebo kusuka ku-Semalt
Uma kuziwa ekuthuthukiseni i-SEO, akusona imfihlo ukuthi okuqukethwe kunenkosi. WakhoOkuqukethwe kwewebhu kufanele kube okufanelekile, okufundisayo nokubandakanya izinjini zokucwaninga ukuze ucabange ukufaka isikhundla sesayithi lakho. Phakathi neminyaka,Kodwa-ke, abezindaba bezenhlalo nabo bangena esithombeni, futhi izimpawu zayo manje zisetshenziselwa ukusiza kangcono injini yakho yokusesha injini.Kuyacaca ukubona ukuthi i-SEO, ukumaketha kokuqukethwe, kanye nabezindaba zomphakathi bonke basebenzisana ngezandla ukuthuthukisa isimo sewebhusayithi yenkampani yakho - korres aftersun cooling.
Ukuze wenze lokhu kucace, kunezeluleko eziphezulu ezingu-5, ezichazwe ngu-Andrew Dyhan,Imenenja Yempumelelo Yekhasimende i-Semalt ,ukusiza ukuthuthukisa i-SEO yakho nokukhangisa kokuqukethwe kanye nemidiya yezenhlalo.
1. Okuqukethwe kwe-Twitter kubalwa
Akukhona nje okuqukethwe okuqukethwe kuwebhusayithi okusiza i-Google ukukhomba isayithi lakho.Uma uthola i-tweet ngokwengeziwe, futhi uma abantu abaningi behlanganyela ama-tweets akho, kungcono amathuba akho wokuhambisa isikhundla sezinkomba. Imvelo enkulu yeweb web jikelele lisho ukuthi izinqubo eziningi zisetshenziselwa ukuqoqa lonke ulwazi futhi kufakwe ohlelweni olutholakala kalula.Abakwa-Google bawusizo ekusizeni ngalokhu kubhaliswa, futhi manje bacabangisisa okuqukethwe kusuka kuma-akhawunti akwa-Twitter. Ngakho-kesebenzisa kakhulu i-Twitter yakho kanye ne-tweet away!
2. Thuthukisa amapulatifomu wakho wezokuxhumana womphakathi ukuze uthole izixhumanisi ezinhle
Ngoba izinjini zokuzama zizama ukuletha ulwazi olufanele kubantuuma beyidinga, bancike emithonjeni yezokuxhumana ukuze basize. Ukuxhumanisa okuningi iwebhusayithi, kubonisa ukuthi abantu bathola leyo sayithiefanele. Ngeshwa, iningi labantu lihlukumeze lokhu esikhathini esidlule futhi libandakanya amasu we-hat-black-SEO ukuthuthukisa izikhundla zabo zesayithi.Lokhu kwaholela ezitsheni zokusesha zishintshela ezokuxhumana zenhlalo usizo..Namuhla izinjini zibuka izimpawu zomphakathi ezifana ne-Facebook, Tweets,I-Google + 1s ukubona ukuthi isayithi lakho lenzani kahle, nokuthi ungayilinganisa kanjani ngokufanele.
3. Sebenzisa imithombo yezokuxhumana ukuze uqinise ukuthembeka kwakho
Izinjini zokusesha namuhla azibheki kuphela okuqukethwe kuwebhusayithi yakho noma kubhulogi.Babheka amapulatifomu wakho wezokuxhumana nabantu. Indlela abantu abahlanganyela ngayo nokuqukethwe kwakho, futhi nokuthi bangaki abantu abaxhumanisabuyela kuwe. Yeka ukuthi izilaleli ezinkulu kanye nomthelela onakho nazo zicatshangelwa kanjani, ngakho-ke sebenzisa isikhathi sokuthuthukisa ukufinyelela kwakhonjengoba ukhulisa izilaleli zakho.
4. Thumela ku-Google + nsuku zonke
Thuthukisa iphrofayela yakho ye-Google +, thumela nsuku zonke futhi i-Google izojabula nawe.Joyina imiphakathi futhi uthumele okuqukethwe okuhlobene, wabelane ngephrofayela yakho, vele usebenze kuphrofayela yakho ye-Google +. Qinisekisa ukuthi ungubaniukwabelana ku-Google + yakho okuqukethwe ofuna ukuyikhokha.
5. Qinisekisa futhi ufanele umdlalo wakho we-SEO
Uma ukhuluma nge-SEO nokuqukethwe, izinto ezifana namagama angukhiye, izincazelo ze-meta, altukumaka izithombe, kanye nenani lamagama kubhulogi lakho okuthunyelwe konke okubalulekile. Noma kunjalo, izinto zishintshile kancane ngesikhathi. Izinjini zokusesha zikhonamanje okhathazeke kakhulu ngokuhambisana kokuqukethwe kwakho. Akukhona nje ukugxila igama elingukhiye, kodwa ukuthi ungayiphendula kanjani ngempumeleloimibuzo abantu bayayibuza. I-SEO iguqula uhlobo lokuqukethwe oluvela emiphumeleni yakho. Ngakho-ke qiniseka ukuthi wakhookuqukethwe kunesidingo futhi kusebenza ngangokunokwenzeka.
I-SEO, ukumaketha kokuqukethwe, kanye nemidiya yezenhlalo akuhambisani. Uma kukhona, baziya ngokuphindaphindiwe njengoba iminyaka ihamba. Bonke basiza ekuthuthukiseni i-SEO kanye nesigaba sesayithi futhi kufanele kucatshangelwendawonye kumasu wokuthengisa iwebhusayithi.